State withdraws charges against Kurauone – Zimbabwe Daily
HARARE – Godfrey Kurauone, MDC Alliance youth National Organiser and Councillor for Ward 4 in Masvingo was acquitted of criminal nuisance charges levelled against him following the withdrawal of the case by the state.
Godfrey Kurauone received support from arguably the most powerful woman in recent history
The state, through Prosecutor Mbambo, withdrew the charges levelled against Kurauone since 31st of July after he was arrested for allegedly singing anti-Mnangagwa songs.
MDC-Alliance Councillor – Godfrey Kurauone
He has been in prison since then and has continously been denied bail.
Kurauone will however, return to court Thursday for commencement of his trial on charges of obstruction or endangering free movement of people and traffic.
MDC-Alliance Councillor – Godfrey Kurauone attending Presidential Precinct YAL on young leaders in the US
He is being represented by Martin Muneri of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR).
MDC-Alliance Councillor – Godfrey Kurauone makes a point to fellow young leaders at the Presidential Precinct YAL in the US
MDC-Alliance Councillor – Godfrey Kurauone participating in an activity at the Presidential Precinct YAL in the US
MDC-Alliance Councillor – Godfrey Kurauone pictured here with fellow Presidential Precinct attendant in the US
MDC-Alliance Councillor – Godfrey Kurauone shares picture opportunity with other young leaders who were participating in the Presidential Precinct in the US
HARARE - Godfrey Kurauone, MDC Alliance youth National Organiser and Councillor for Ward 4 in Masvingo was acquitted of criminal nuisance charges levelled against him following the withdrawal of the case by the state. MDC-Alliance Councillor - Godfrey Kura...